Are You Human Too? (2018) [COMPLETE] – Channel Myanmar Share
Original name너도 인간이니
StarringCha In-Ha, Cha Yup, Chae Dong-hyun, Choi Byung-mo, Choi Deok-moon, Gong Seung-yeon, Jo Jae-ryong, Kim Hye-Eun, Kim Hyun-Sook, Kim Sung-ryung, Kim Won-hae, Lee Joon-hyuk, Oh Hee-joon, Park Hwan-Hee, Park Young-gyu, Seo Kang-joon, Yu Oh-seong
Synopsis of Are You Human Too? (2018) [COMPLETE]
Science fiction ကား​တွေကို နှစ်​သက်​တဲ့ ပရိသတ်​​တွေအတွက်​​ရော ro မှ ro တစ်​လိုင်းဆိုတဲ့ ပရိသတ်​​တွေအတွက်​​ရော အားလုံး​စောင့်​​မျှော်​​နေတဲ့ Are U Human Too…..ဆိုတဲ့ K Drama ​လေးကို တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​တယ်​​နော်​…
ချမ်းသာတဲ့ သူ​ဌေးကြီးရဲ့ ​မြေးဖြစ်​တဲ့ နမ်​ရှင်းဟာ PK Group ရဲ့ အမွေဆက်ခံသူဖြစ်​ပြီး အဖိုးရဲ့ခြိမ်း​ခြောက်​မှု​ကြောင့်​ ၇နှစ်​အရွယ်​ကတည်းက မိခင်​ဖြစ်​သူနဲ့ ခွဲ​နေရတဲ့သူပါ။
နမ်​ရှင်းရဲ့မိခင်​ဖြစ်​တဲ့ Oh Ro Ra ဟာ စက်​ရုပ်ပိုင်းဆိုင်​ရာ လူသားမှတ်​ဉာဏ်​တုပြုလုပ်​တဲ့ ပညာရှင်​တစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး နိုင်​ငံခြားမှာ​နေရ​ပေမယ့်​ သားဖြစ်​သူနဲ့ ရုပ်​ပုံစံတူ နမ်​ရှင်း 1 နဲ့ နမ်​ရှင်း2AI စက်​ရုပ်​​တွေပြုလုပ်​ပြီး သားကိုအလွမ်း​ဖြေ​နေရသူဖြစ်​ပါတယ်​။
မိခင်​ကိုရှာဖို့ ချက်​ကိုစလိုဗားကီးယားနိုင်​ငံကို​သွားတဲ့နမ်​ရှင်း တစ်​​ယောက်​ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး Coma ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ​တော့ မိခင်​ Oh Ro Ra ဟာ သားရဲ့အ​မွေဆက်​ခံသူ​နေရာ မ​ပျောက်​ပျက်​​ရေးအတွက်​ သားနဲ့ပုံစံတူ နမ်​ရှင်3းစက်​ရုပ်​ကိုတီထွင်​ပြီး လူသား နမ်​ရှင်း ​ကြောင့်​အလုပ်​ပြုတ်​ခဲ့ရတဲ့ ကန်​ဆိုဘုံးဟာ စက်​ရုပ်​ နမ်​ရှင်3းရဲ့ သက်​​တော်​​စောင့်​ဖြစ်​လာခဲ့ပါတယ်​။
စက်​ရုပ်​​ကောင်​​လေးဖြစ်​တဲ့ နမ်​ရှင်း 3တစ်​​ယောက်​ ကြင်​နာတတ်​တဲ့ ဂန်​ဆိုဘုံးရဲ့အနားမှာ လူသားဆန်​တဲ့အပြုအမူ​တွေကိုဘယ်​​လို​တွေသင်​ကြား​ပေးမလဲ….? သူတို့နှစ်​​ယောက်​အ​နေနီးရာက​နေ ခံစားချက်​​တွေဖြစ်​လာခဲ့ပြီး​နောက်​ပိုင်း ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​လာမလဲ ……? ဆိုတာက​တော့ ဒီ series ​လေးမှာ စိတ်​ဝင်​စားစရာ ကြည့်​ရှုရမှာပါ။
သူ​ဌေးသား​လေး နမ်​ရှင်း အဖြစ်​​ရော စက်​ရုပ်​ နမ်​ရှင်3းအဖြစ်​​ရော Seo Kang Joon ကသရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီးသက်​​တော်​​စောင့်​မ​လေး ဂန်​ဆိုဘုံးအဖြစ်​ Gong Seung Yeon က တွဲဖက်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတာပါ။
နမ်​ရှင်းရဲ့ သူငယ်​ချင်းလဲဖြစ်​ အတွင်း​ရေးမှူးလဲဖြစ်​တဲ့ Ji Young Hoonအဖြစ်​ lee Joon Hyuk နဲ့
PK group ဒါရို​က်​တာတစ်​ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်​သူ နမ်​ရှင်းရဲ့ ဇနီး​လောင်း Seo Ye-na အဖြစ်​ Park Hwan-hee တို့က ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ₩10 billion အကုန်​ကျခံရို​က်​ကူးထားတယ်​လို့သိရပြီး တနင်္လာ အင်္ဂါနေ့တိုင်း
KBS2 channel မှ ထုတ်လွှင့်​မှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
Translators : Ei San,Kyar Phyu and May Tharaphi
Encoder : Thanhtike Zaw
Ep 1+2 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 3+4 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 5+6 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 7+8 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 9+10 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 11+12 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 13+14 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 15+16 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 17+18 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 19+20 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 21+22 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 23+24 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 25+26 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 27+28 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 29+30 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Mega Up Link
Ep 31+32 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Mega Up Link
Ep 33+34 (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Ep 35+36 End (400 MB) GDrive Link / Openload Link / Solid Drvie Link
Firt air date2018-06-04
Last air date2018-07-03
Home PageAre You Human Too? (2018) [COMPLETE]
Lucifer Season 1 [COMPLETE]
The King Dae Joyoung(2006)[Complete]
Merlin Season (5)
Money Heist(2017)Season 2[စ /ဆုံး]